Sary hosodoko nomerika 'Saribakoly' an'i Kare Huang | Famoronana an-tserasera
Raha mitady an'ity mpanakanto ity ao amin'ny DeviantArt isika dia ho hitantsika amin'ny anarany tommy830219. ny mpanao sary nomerika taiwan izay anoloranay indray ny mpanakanto izay manana fanoloran-tena lehibe amin'ny kanto sy ny kanto nomerika mamela antsika hihaona anarana vaovao
Ny antony hitondrana an'i Huang hanaraka ireo andalana ireo dia noho ny asa vita ny sasany amin'ireo programa izay fantatsika rehetra ary antsoina hoe 'Saribakoly'. Drafitra vita tsara izay manasongadina ny tsipika marina sy matevina ary paleta miloko voafantina tsara hitondrana antsika any amin'ilay habaka manokana sy tsy miankina an'io zazavavy natory teo ambony latabatra tao amin'ny efitranony io.
Izany zazavavy matory izany saribakoly android natsangana eo alohany ary tsy misy mpikambana ao amin'ny vatany toy ireo tongotra ireo. Tsaroako i Alita, anjely mpiady, fa andao avelantsika ho Android izy.
Huang dia mitondra antsika any amina asa vita tsara sy miaraka aminy tsipika matevina be izay tsy tena ankasitrahana ny antsipiriany tena marina fa fomba manokana iray hahafaly anay amin'ity fanoharana ity.
Misy mpanakanto manana mari-pahaizana teknika tena tsara, tsy latsa-danja koa i Huang, fa aiza miavaka dia ao amin'ny firafitra misokatra io varavarankely io ary saika mihetsika ny ambainy alohan'ny fahitana azy, na rehefa miditra ao ny fahazavana rehetra amin'ny masoandro mamirapiratra raha toa ka natory kely ilay zazavavy.
Tommy830219 manana ny DeviantArt anao hahafahanao manohy ny asany, manan-danja amin'ireo kapoka ireo sy ny seho andavanandro misy ny endri-tsoratra izay mankamamy ny fihetsik'izy ireo ary hazavana manenika ny ankamaroan'ny sanganasa zarainy amin'ity tranokala ity ka eken'ny mpanakanto ary toerana ahitana talenta marobe.
Raha mitady mihoatra ny nomerika ianao, eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Doll' dia sary hosodoko nomerika nataon'i Kare Huang